Fanafihana :: Lehilahy iray notetehin’ny jiolahy • AoRaha
Fanafihana Lehilahy iray notetehin’ny jiolahy
Namoy ny ainy vokatry ny fanafihan’andian-jiolahy nitondra basy sy lefona ny raim-pianakaviana iray manana omby maro tany Andranolaza-Manja, iray volana lasa izay. Notetitetehin’ireo mpanao ratsy mihitsy ilay lehilahy. Tra-tehaky ny polisy any an-toerana ny jiolahy iray ahiana ho isan’ireo nahavanon-doza, taorian’izay, niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana maro mahery vaika.
Basim-borona iray misy vavany roa, basy poleta iray miaraka amin’ny bala ary bala ana “kalachnikov” sy ody gasy maro no sarona tao amin’ny tranon’io ahiahiana ho isan’ireo jiolahy nanafika namono nahafaty raim-pianakaviana io, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Ankoatra ny omby dia vola an-tapitrisany ariary ihany koa no voalaza fa lasan’ireo jiolahy nanao ny fanafihana. Nisy ny fanenjehana nataon’ireo mponina, saingy tsy nahitam-bokany izany. Nametraka fitoriana teny anivon’ny polisy any an-toerana ny havan’ilay namoy ny ainy, ny ampitson’ny fanafihana ka nitarika tamin’izao fahatrarana ny jiolahy nahavanon-doza izao.
Fanazavana ampahibemaso :: Miresaka ny fifandraisany sy ilay mpivarotra andramena ny jeneraly Ravalomanana
Volley-ball – Afrika :: Lavo fanindroany ny ekipan’ ny Zandarimariam-pirenena